नेपालमै हुने भयो हास्य कलाकार ‘चम्सुरी’को मिर्गाैला प्रत्यारोपण , कसले दिदैछ चम्सुरीलाई मिर्गाैला? – Kavrepati
Home / समाचार / नेपालमै हुने भयो हास्य कलाकार ‘चम्सुरी’को मिर्गाैला प्रत्यारोपण , कसले दिदैछ चम्सुरीलाई मिर्गाैला?
admin July 25, 2021	समाचार Leaveacomment 84 Views
काठमाडौंको महाराजगन्जस्थित त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा उपचाररत हास्य कलाकार पल्पसा डंगोल (चम्सुरी) ले मिर्गाैला प्रत्यारोपण गर्न पाउने भएकी छन्। उनका भाइ राजु डंगोलका अनुसार परिवारभित्र पर्ने चार–पाँच जना मिर्गाैला दिन राजी भइसकेका छन्। उनीहरूको स्वास्थ्य, ब्लड ग्रुपलगायत स्वास्थ्य परीक्षण भइरहेको छ।
सुरुमा मिर्गाैला प्रत्यारोपणका लागि उनलाई भारत लाने तयारी गरिएको थियो। नेपालमा मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्न हाडनाताभित्रका मानिसले मिर्गौला दिनुपर्ने कानुन छ। अहिले नाताभित्रकै मानिसबाट मिर्गौला पाउने भएपछि नेपालमै प्रत्यारोपण गर्न लागिएको डंगोल परिवारले जनाएको छ।
घरमै बसिरहेको बेला सास फेर्न गाह्रो भएपछि कलाकार डंगोल अस्पताल भर्ना भएकी थिइन्। त्यस क्रममा स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा उनका दुवै मिर्गाैलाले काम गर्न छाडेको पत्ता लागेको हो। उनी १५ वर्षदेखि मिर्गौलाको समस्याबाट पीडित थिइन्।
Previous दिल्लीका सुरक्षाकर्मी ह्वारह्वार्ती किन काठमाडौंमा ?
Next फेरि अर्को खतरनाक नयाँ ‘भेरिएन्ट’ भेटियो , खोप लगाएका मानिसलाई पनि पुनः संक्रमण हुन सक्ने